बाहुन काँठा : बाहुनकै वकपत्र | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
बाहुन काँठा, ब्राम्हण र यस सेरोफेरोका समाज बाहेकमा व्यापक प्रचलित शब्द हो यो । नेपालमा यसको इतिहास खोज्ने हो भने सत्यतामा आधारित कथाहरूको चाङ्ग नै भेटिएला भन्ने कुरा किटानी साथ भन्न सक्छु । सानै उमेरदेखि सुनिदै र सुनाइदै आइएको यो शब्दको बडो गहिरो अर्थ छ । हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसै बनाएका होइनन् रहेछ, यी र यस्ता शब्द र उखान टुक्काहरू । केटाकेटी छँदा यसको बिष्तृत माने मतलब भलै बुझिएन तर कालान्तरमा देश र परिस्थिति फेरिए साथै यसको गहिराइ बुझ्न गाह्रो परेन । पल्ला घरे गुरुङसेनी आमै र लाल दरबारका श्रेष्ठ काकाले बेला बखत भन्ने गरेको यस शब्दको साँचो अर्थ बिगत कयौं बर्षदेखि देशमा घटित घटनाहरूले छर्लंग्याइ दिएको छ ।
लेखको मुलतः उद्धेश्य भनेको वर्तमान अराजक स्थिति र बाहुन काँठाहरूको योगदानबारे केही नलेखिएका विषयहरूको उठान गर्नु नै हो । व्यक्तिवाद, प्रचारक र जातीय आरोप नलाग्लान् भन्ने छैन तर नेपाल आमाको मुटु चिरिदा यो मुटु पनि सँगसँगै चिरिदो रहेछ र भक्कानिएको मुटुबाट निस्किएको असभ्यतालाई बेवास्ता गरीदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा रखिएको छ । स्थिति यति बिकराल देखिन्छ कि अब सभ्य तवरमा मुखै मात्रले भनेर यी बाहुन काँठाहरूलाई पुगेन, पाठक बृन्द ! लातको देउता बातले मान्दैन भन्याझै कृपया माफ पाउ नचाहँदा नचाहँदै लेखमा अनादरबाची शब्दहरू व्यापक रुपमा प्रयोग भएका छन् । बाध्यता !
कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट सुरु भएको यी काँठाहरूको मनोमानी तन्त्र क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशिल कोइराला हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा देश उठ्नै नसक्ने विपदको अवस्थामा रहेको छ । अपवादमा थापा, चन्द र देउवा पनि कार्यकारी प्रमुख भए होलान् तर यी पनि तिनै काँठाहरूकै हिमचिममा हुर्किएका देशका नालायक र नाजायज सन्तान हुन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन । रछ्यानमा राज गर्न पल्किएका यी नालायक झिंगाहरूले आफुलाई त सगोल र सम्पूर्ण राखे तर सम्पूर्ण देश र जनतालाई रोगी बनाएर छाडे ।
देश र जनताको भविष्य यति धेरै पछाडी धकेलिइ सकेको छ जसको अनुमानसम्म गर्न गाह्रो छ र यसको प्रमुख कारण यी बाहुनकाँठाहरूको अदुरदृष्टि र अकर्मन्यता नै हो । राजनैतिक असफलताको नतिजा हो भन्नु पनि अतिरन्जित नहोला । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात अधिकांश समय राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा विराजमान यी काँठाहरूले आज सम्पूर्ण देशलाई अराजकताको बिकट परिस्थितिमा उभ्याइ दिएका छन् ।
चरम अभाव, महङ्गी, जातीय दंगा, मनपरी तन्त्र, विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना, बेरोजगारी, खुल्लम खुल्ला देश टुक्र्याइने अभिव्यक्ति दिने परिस्थितिको निर्माण, मौलिएको भ्रस्टाचार आदिइत्यादि यिनै बाहुन काँठाहरूको औंठा छाप दिमागले निम्त्याएको समस्या हो भन्नुमा कुनै दुई मत छैन । कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट सुरु भएको यी काँठाहरूको मनोमानी तन्त्र क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशिल कोइराला हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा देश उठ्नै नसक्ने विपदको अवस्थामा रहेको छ । अपवादमा थापा, चन्द र देउवा पनि कार्यकारी प्रमुख भए होलान् तर यी पनि तिनै काँठाहरूकै हिमचिममा हुर्किएका देशका नालायक र नाजायज सन्तान हुन् भन्दा कुनै फरक पर्दैन । रछ्यानमा राज गर्न पल्किएका यी नालायक झिंगाहरूले आफुलाई त सगोल र सम्पूर्ण राखे तर सम्पूर्ण देश र जनतालाई रोगी बनाएर छाडे ।
२०४९/५० साल ताका आफू काम गर्ने कार्यालयमा सँगै काम गर्ने एक चाइनिज कर्मीको भनाइ आज बडो सम्झना आइरहेछ । त्यस बखत चाइना रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष कुनै काम विशेषले नेपाल आएका रहेछन् । सो काम नेपालको हितमै भए पनि सम्झौता हुन नसक्दा मेरा ती चाइनिज मित्र दिक्दार भएर मलाई भन्दै थिए अनुप, नेपालका ठुलाठुला मानिसको बुद्धि छैन । हो आज म स्पष्टसँग भन्न सक्छु तिनले किन त्यस्तो भने भनेर । पारिवारिक रेखा र भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका त्यस बेलाको कार्यकारी प्रमुख पदमा एउटा मुर्ख बाहुन काँठा नै बिराजमान थियो ।
चरम अभाव, महङ्गी, जातीय दंगा, मनपरी तन्त्र, विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना, बेरोजगारी, खुल्लम खुल्ला देश टुक्र्याइने अभिव्यक्ति दिने परिस्थितिको निर्माण, मौलिएको भ्रस्टाचार आदिइत्यादि यिनै बाहुन काँठाहरूको औंठा छाप दिमागले निम्त्याएको समस्या हो भन्नुमा कुनै दुई मत छैन ।
आज मेरो देश रोइरहेछ, देशका जनता एक मुठी सुशासनका लागि तड्पी रहेका छन् । सी के राउतजस्ताहरू हातमा कर्ध र चक्कु लिएर नेपाल आमालाई चोक्टा–चोक्टा पार्न अग्रसर छन् । भ्रष्टाचारी बिषालु सर्पहरू देशको नशा–नशामा पसेर डसेका डसै छन् । कुशासन देखेर सगरमाथा लाजले मुन्टो उठाउन सकेकी छैनन् । बुद्ध र जानकीलाई यो पवित्र भूमिमा जन्मेको पिडाबोधले भत्भती पोलीरहेको होला तर अँह देशका यी कुपुत्र काँठाहरूलाई यसको कुनै चिन्ता छैन, मतलब छैन । आफ्नो र आफ्नाको हित्तचित्त बुझाउन पाए पुग्यो । ‘अपना काम बनता, भांडमे जाए जनता’ भन्या झैँ, तर हे मुर्ख काँठाहरू हो ! ती दुष्टहरू आफ्नो उद्धेश्यमा सफल भएमा तिमी र तिम्रा आफन्तहरूको के गति हुनेछ, कहिले सोचेका छौ ? धिक्कार छ तिमीहरूलाई ।
कस्तो बिडम्बना र दुर्भाग्य, यो देशको ! देशमा एउटा गान्धी, अब्राहम लिंकन वा नेल्शन मण्डेला त जन्मन सकेनन् सकेनन्, एउटा परवेज मुशर्रफ वा महिन्द्रा राजापक्षे समेत जन्मन नसक्दा ! पुग्यो हे नेपाल आमा ! त्यत्रा कुपुत्र बाहुन काँठाहरू दिनु साटो एउटा मात्र सुपुत्र देऊ जसले तिम्रो लाज राखोस् र हामी जनतालाई मुक्ति देओस्, त्राहिमाम ! त्राहिमाम ! भन्ने अवस्था छ । यिनै बाहुन काँठाहरूको कारणले ।
२५ र २६ बर्षको समयावधि प्रशस्त हुन्छ कुनै पनि देशलाई एउटा सही गन्तब्यतिर डोर्याउन, तर यी भ्रष्ट बुद्धिका बाहुन काँठाहरूको कार्यशैली राजनैतिक रुपमा यति खत्तम देखियो कि देश झन पाषाण युगमा प्रवेश गर्यो । यत्रो लामो समय पाएर पनि देशलाई एउटा सिस्टममा लैजान नसकेका हे मतिभ्रस्त बाहुन काँठाहरू हो ! अझै पनि तिमीहरू कुन मुखले सत्ताको अग्रपंक्तिमा लम्पसार परेका छौ ? लोक लाज हराएकै हो त ? जनताले पटक–पटक तिमी बाहुन काँठाहरूलाई सत्ताको उचाइमा पुर्याएको आजको यो दुर्दशा हेर्नैलाई हो त ? म स्वयम् लज्जित छु उक्त समुदायसित नाम जोडिदा ।
विदेश बसेको धेर भएछ, मातृभूमिका लागि केहि गरौं भन्ने भावना लिएर गएका ती प्रवासी नेपाली सरकारमा भएका बाहुन काँठाहरूको भ्रष्टाचारी मनोवृतिले यति आजित भएछन् कि भविष्यमा कुनै परियोजना लिएर नजाने मनस्थिति बनाइ फर्केछन् । अनि देश बन्छ ?
देशका कतिपय क्षेत्रमा नाम कहलिएका र बाध्यताले विदेशिनु परेका राम्रा दाजुभाइ दिदिबहिनीहरू हुनुहुन्छ । बेला–बेलामा उहाँहरूको अन्तरवार्ता रेडियो र टिभीमा बजेकै हुन्छ । ‘डूबते को तिनकेका सहारा’ भन्या झैँ कार्यक्रम सञ्चालकले पनि मौका हेरी सोधी हाल्छ, राजनीतिमा न आउने भनेर ? र प्रायजसोको जवाफ त्यो मेरो क्षेत्र होइन र नाइ नै हुन्छ । हुन त आ–आपÞm्नो इच्छा हो राजनीतिमा आउनु नआउनु तर त्यति भनेर तपाईं कर्तब्यबाट पन्छिन पाउनु हुदैन । जनताले पत्याएका, विश्वास गरेका, सीप, उच्च शिक्षा र धन भएका तपाईंहरूसित यस देशले ठुलो आशा राखेको छ ।
देशको बिग्रदो स्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर मेरो क्षेत्र होइन भनेर जान नखोज्नु अपराध पनि हो जनताका नजरमा । रोनाल्ड रेगन अभिनय गर्थे तर उनी सफल अमेरिकी राष्ट्रपति भएर देखाइदिए । गान्धी धेरै वर्ष विदेश बसे तर पछि भारतको राष्ट्रपितासम्म बन्ने गरी फर्के । भनाइको अर्थ राजनीति आफैमा दुर्ग्न्धित ठाउँ होइन, त्यसलाई सफा राख्ने एउटा पात्र हामीले फेला पार्न नसकेका मात्र हौं । आइदिनुस् अगाडी हे श्रष्टा धिरेन्द्र प्रेमर्षीजी, दिल भुषणजी, मनोज गजुरेलजी, बसन्त चौधरीजी, दिल निशानी मगरजी, पासाङ ल्हामु शेर्पा र शान्ता चौधरीजी, मह दाइहरू, महावीर पुन सर, तोया गुरुङजी, राजेश हमालजी, यो राजनीति दुर्गन्ध सफा पार्न । यी र यस्ता धेरै नामहरू छन् यो जसको उज्यालो प्रकाशले देशले रौनकता र यी स्वयम्परक निर्घिन बाहुन काँठा‏हरूबाट निकास पाउनेछ । यति मात्र गर्न सक्नुभयो भने यो देश र जनताले सत्सत् सलाम गर्नेछ, नमन गर्नेछन् तपाईहरूलाई । ऋणी हुनेछन् यी देशका जनता तपाईहरूप्रति ।
बाहुन काँठा‏हरूको असक्षमता र अकर्मन्यताले देश जातीय दंगाको चरम संघारमा उभिएको छ तर यी दुष्ट बाहुन काँठा‏हरूको जमात यसलाई राष्ट्रिय रुपमा सुल्झाउनतिर लाग्नुभन्दा कसरी हुन्छ बल्झाई राखौं र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरौं भन्ने ध्याउन्नमा चुर्लुम्म डुबेकोले समस्या जहाको तहीँ छ । कसरी समाधान होला खै ? मान्छु, गल्ति दुबैतिर होला तर हे काँठाहरू हो ! जब डाडु पन्यु तिमीहरूको हातमा छ भने, साझा र राष्ट्रिय रुपमा काम गर्नसक्नु पर्दैन ? तिम्रा युवादस्ता र के–के विधि संगठनहरू हरेक क्षेत्रमा छन्, ती भएका संगठनहरू एकसाथ मिलेर परिचालन गर्नु पर्दैन ? जनतालाई सहि कुरा बुझाउन सक्नु पर्दैन ? त्यति मात्र बुझाउन सकेको भए आज देशको यो स्थिति हुदैनथियो होला तर यी स्वाँठ बुद्धि भएकाहरूसित त्यत्रो ठुलो कुराको आशा गर्नु सायद हामी जनताकै गलती देखिन आउछ ।
हो आज म स्पष्टसँग भन्न सक्छु तिनले किन त्यस्तो भने भनेर । पारिवारिक रेखा र भ्रस्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका त्यस बेलाको कार्यकारी प्रमुख पदमा एउटा मुर्ख बाहुन काँठा नै बिराजमान थियो ।
गल्ती त तिमी बाहुन काँठा‏हरूले प्रशस्त गरेका छौ तर मेरो आश्चर्यता त तिमी सुधारिन पनि तयार नभएको देखेर हो । एउटा सामान्य उदाहरण, जब पहाडी मुलका अधिकांश हामी जनताले लाउने टोपी राष्ट्रिय पोशाक हुन् सक्छ भने मधेसी मुलका अधिकांश नेपाली जनताले लाउने धोती किन राष्ट्रिय पोशाक हुन नसक्ने ? हाम्रा तराईबासी दाजुभाइहरूले सगौरव टोपी लगाएको देखिएको छ, त्यस्तै पहाडी दाजुभाईहरूले पनि शानले धोती पहिरिएको देखिएको छ अनि यो विभेद किन? त्यति मात्रै पनि गर्न सके त्यसले हाम्रा तराईबासीलाई एउटा गौरवको अनुभूति दिनसक्थ्यो र समस्या समाधानमा लचकता थप्न सक्थ्यो । तर खै त यति जाबो कुरो पनि तिम्रो मगजमा घुसेको काँठाज्यु ?
तिमी काँठा‏हरूको यो प्रवृतिले यस देशले धेरै–धेरै कुराहरू गुमाउनु परेको छ । बिष्तृतमा सूचीबद्ध गर्ने हो भने उपन्यासको ठेलीनै रचना होला । मसँग त सम्पूर्ण हिसाबकिताब नहोला तर कालान्तरमा कसैले त सूचीबद्ध गर्ला नै भन्ने आशामा छु । तिमीहरूको अकर्मन्यताको एउटा सानो उदाहरण, ४/५ बर्ष पुरानो घटना हो, क्यानाडाबाट एक पुराना नेपाली एउटा बृहत स्कूल परियोजना लिएर गए । विदेश बसेको धेर भएछ, मातृभूमिका लागि केहि गरौं भन्ने भावना लिएर गएका ती प्रवासी नेपाली सरकारमा भएका बाहुन काँठाहरूको भ्रष्टाचारी मनोवृतिले यति आजित भएछन् कि भविष्यमा कुनै परियोजना लिएर नजाने मनस्थिति बनाइ फर्केछन् । अनि देश बन्छ ?
देशको हरेक क्षेत्र दिशाहीन गन्तब्यतिर बढी रहेको छ । कार्यकारी प्रमुख नहुन्जेल मरिहत्ते गर्ने तर भइसके पछि केही नगर्ने अझ छुटेको भोलिपल्ट नै अरुले गर्न दिएन भनी पनि मुनिको ओभानो बन्न खोज्ने यी काँठाहरूलाई जिम्मेवारी भन्ने कुराको अलिकति पनि बोध छैन ? चकित छु म । होस् गर तिमी काँठाहरू हो ! जनता धेरै आजित् भै सक्या छन्, तैपनि सहेर बसेका नै छन् । धैर्यको परीक्षा नलेउ, जुन दिन जनता जाग्छन्, बनारस बास होला, भनेन् नभन्नु । मेरो भन्नु यत्ति हो ।
टोरोन्टो, क्यानाडा ।
०९ असार, २०७३
Posted by admin on Jun 23 2016. Filed under Breaking News, दृष्टिकोण, पत्रपत्रिकाबाट. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
4 Comments for “बाहुन काँठा : बाहुनकै वकपत्र”
June 23, 2016 - 10:43 am
Mr Anup Neupane,you are 100% right.
June 23, 2016 - 5:17 pm
Yo Randi ko xorolai maile vetnu parx ani thaha hunxa2tukra huda ,ho yestolai ho hamile chhapkaunr vaneko,yeeni haru Hun samaj vadkaune samaj ka Kira
July 25, 2016 - 9:15 am
December 6, 2016 - 9:25 am
hLOG7A I want to encourage you to continue your great posts, haveanice holiday weekend!